Mawduucyada Russell Artzt Martech Zone |
Maqaallada by Russell Artzt
Russ Artzt waa aasaasaha iyo agaasimaha guud Asxaabta Dijital ah, oo ay weheliso Vince Re, Madaxa Teknolojiyada, soosaaray xalal kumbuyuutar ku saleysan daruur si looga caawiyo ganacsiyada hanashada deegaankooda dhijitaalka ah.
Fowdo ayaa ku dhuunta adduunka dhijitaalka ah. Shirkad kasta waxay si fudud ku waayi kartaa raadkeeda hantideeda dhijitaalka ah xilliyadii ay diiwaangelinta degmooyinku ku dhacaan daraasiin siyaabo kala duwan ah iyo marka isku biiritaanka iyo soo iibsiga si joogto ah loogu daro degello cusub isku darka. Domains ka diiwaan gashan oo aan waligood horumarin. Websaydhyo soconaya sannado aan cusbooneysiin. Fariimo isku dhafan oo ka socda goobaha suuq geynta. Kharashaadka xad-dhaafka ah. Dakhli lumay Waa jawi kacsan. Deegaanada dhijitaalka ah ee shirkadaha si joogto ah ayey isu beddelayaan, oo ay ula socdaan